သူရဦးရွှေမန်း ဗြိတိသျှသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
You are at:Home»ပါတီလှုပ်ရှားမှုများ»ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး»သူရဦးရွှေမန်း ဗြိတိသျှသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
By cms cms on	 09-01-2020 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၉
ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိသျှသံအမတ်ကြီး H.E. Mr Dan Chugg အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့၊ ညနေ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ်အချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ သူရဦးရွှေမန်း၏ နေအိမ်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီေခါင္းေဆာင္ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr Dan Chugg အား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔၊ ညေန ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သူရဦးေရႊမန္း၏ ေနအိမ္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။